Nsu mu nwaw atiridii - Wikipedia
Nsu mu nwaw atiridii
Nsu mu nwaw atiridii, a wͻsan frε no schistosomiasis, yε yare bi a nsonsono bi a wͻte nipadua mu a wͻye nsonsono tratraa a a wͻfrε noschistosome de ba. Dwensͻtwaa no anaa obi nsono ho betumi aba asεm. Nsεnkyerεnne no bi ne ayaase yaw , ayamtu , mogya a εwͻ agyanan mu , anaa mogya a εwͻ dwensͻ mu . Wͻn a wͻanya yare yi bere tenten betumi anya berεbo mu haw , asaabo mu haw , awo a εmma , anaa dwensͻ kotoku mu kokoram Wͻ mmofra mu no, ebetumi ama wͻrennyin papa ne adesua mu haw .
Yare no trεw denam nsu a εwͻ mmoawa no a εka obi. Mmoawa yi fi nsu mu nwaw a wͻwͻ mmoawa yi mu. Yare yi abu so wͻ mmofra a wͻwͻ aman a ehia wͻn mu esiane sε mmofra yi taa di agoru wͻ nsu a mmoawa yi wom mu. Afoforo a wotumi nya bi ne akuafo, apofofo, ne afoforo a wͻde nsu yi di dwuma.Yare yi wͻ yare a nsonsono de ba .Wͻnam nsonsono yi nkesua a wͻhwehwε wͻ obi dwensͻ anaa agyanan mu na εyε yare yi mu nhwehwεmu. Wobetumi nso ahu denam nipaduam nnuru a εko yare mu a wͻhwehwε wͻ mogya mu.
Akwan a wͻfa so siw yare yi kwan bi ne nsu a emu tew a wͻde di dwuma ne nsu mu nwaw a wokum wͻn. Wͻ mmeae a yare yi abu so no, aduru praziquantel yε nea wobetumi de ama nnipakuw no. Wͻyε eyi de tew nipa a wͻanya yare yi dodow so, na εnam so asiw yare no trεw ano. Praziquantel ne aduru a Wiase Akwanhosan Ahyehyεde (WHO) akamfo de akyerε.
Nipa bεyε ͻpepem ahanu ne du na wonyaa nsu mu nwaw atiridii(schistosomiasis) wͻ wiase nyinaa wͻ afe 2012 mu.  Nipa bεyε mpem dumien kosi mpem ahanu na wͻfa mu wu afe biara. Yare yi abu so wͻ Afrika, Asia ne Amεrika Anafo. Nipa bεyε ͻpepem ahansͻn wͻ aman bεboro aduosͻn na wͻtete mmeae a yare yi abu so mu. Wͻ aman a ͻhyew wom no, nsu mu nwaw atiridii na edi atiridii(ntontom de) akyi wͻ nyarewa a εtete saa mu a εde sikasεm haw ba. Wͻakyerε sε nsu mu nwaw atiridii(schistosomiasis) yε yare a wͻabu ani agu so .
Retrieved from "https://ak.wikipedia.org/w/index.php?title=Nsu_mu_nwaw_atiridii&oldid=21186"
This page was last edited on 23 Ɛbɔ 2019, at 03:45.